Khawufane ucinge, umzekelo, imifanekiso, iaudiyo, okanye iividiyo ezisebenzisa itekhnoloji enzulu ukuseta ezopolitiko. Nokuba ichongiwe njenge-deepfake, isiphumo sinokuhamba ngesantya semithombo yeendaba ukuze sisebenzise umbono wovoto. Kwaye ngelishwa, ipesenti ebalulekileyo yabavoti- ngelixa incinci- inokukholelwa.
Kuyo yonke le mizekelo, ubunzulu abukho ukukhohlisa kodwa ukuphucula unxibelelwano. Umgca omncinci ... kwaye amashishini kuya kufuneka alumke xa ehamba!